नेपालमा काे-राेनाकाे तेस्रो लहर शिथिल भए पनि जोखिम चाहिँ कायम नै, यस्ताे छ तथ्यांक ! – List Khabar
Home / समाचार / नेपालमा काे-राेनाकाे तेस्रो लहर शिथिल भए पनि जोखिम चाहिँ कायम नै, यस्ताे छ तथ्यांक !
नेपालमा काे-राेनाकाे तेस्रो लहर शिथिल भए पनि जोखिम चाहिँ कायम नै, यस्ताे छ तथ्यांक !
admin February 13, 2022 समाचार Leaveacomment 31 Views
नेपालमा को- भिड-१९ को तेस्रो लहर ओरालो लागेको सङ्क्रामक विज्ञहरूले बताएका छन् । सङ्क्रमणदर र मृ- त्यु दर घट्दो भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्कले पुष्टि गर्छ । सङ्क्रमणपछि स्वास्थ्यमा समस्या भएकाहरूको सङ्ख्या कम हुँदै गएको सङ्क्रामक रोग विज्ञ डा। जनक कोइरालाले बताए ।
डा। कोइरालाले भने, `काठमाण्डू भन्दा उपत्यकामा भन्दा बाहिर धेरै सङ्क्रमित देखिन्छन् । कुनै ठाउँमा घट्ने र कतै बढ्ने त भइरहन्छ । तर देशभरको सङ्क्रमण दर घट्नु सुखद हो । नयाँ भेरिअन्ट नआउँदासम्मलाई यो लहर घटेकै मान्नु पर्छ ।´ सङ्क्रमण दर घट्दो भए पनि सङ्क्रमणको जोखिम र त्यसले पार्ने असरहरू कायम रहने जनस्वास्थ्यविद्हरू बताउँछन् ।
अस्पताल भर्ना कम:- शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा सङ्क्रमणपछि भर्ना हुनेको सङ्ख्या न्यून रहेको अस्पतालका सूचना अधिकारी नवराज गौतमले जानकारी दिए । केही दिनयता अस्पतालमा दैनिक भर्ना हुनेको सङ्ख्या एकदेखि दुई जनामा सीमित रहेको उनले बताए । `यस साताको सुरुवातदेखि नै सङ्क्रमित साथै बिरामीको सङ्ख्यामा कमी आएको छ,´ गौतमले भने ।
बिहीवारको तथ्याङ्कमा देशभरि ९९१ जना सङ्क्रमित अस्पतालमा उपचाररत रहेका थिए । जुन सक्रिय सङ्क्रमितको चार प्रतिशतभन्दा कम हो । शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा को- भिड-१९ सङ्क्रमित बिरामी सङ्ख्या १० रहेको छ जसमध्ये एक जना सघ-न उपचार कक्षमा छन् । तेस्रो लहर चलिरहँदा सर्वाधिक बिरामी भर्ना भएको दिन २२ जना भर्ना भएको गौतमले बताए ।
ओ-मिक्रोनको लहर:- नेपालमा तेस्रो लहरमा धेरै मानिसहरू ओ-मिक्रोन भेरिअन्टबाट सङ्क्रमित भएका थिए । यसको डेल्टा भेरिअन्टलाई ८८ प्रतिशत प्रतिस्थापन गरेको विज्ञहरू बताउँछन् । माघ २४ गते जीन सिक्वेन्सिङका लागि भारत पठाइएको ९५ वटा नमुनामध्ये सबैमा ओमिक्रोन पुष्टि भएको थियो । त्यसमध्ये ७८ वटामा ओ-मिक्रोनको बीए।टु पुष्टि भएको मन्त्रालयले बताएको थियो । ओ-मिक्रोन भेरिअन्टका को- रोना भाइरसका अरू भेरिअन्टभन्दा द्रुत गतिमा फैलने गरेको बताउने गरिन्छ ।
`तेस्रो लहरमा ओ-मिक्रोन भाइरसको फरक प्रजातिहरू एकसाथ फैलियो । ठीकै भयो । नत्र नयाँ लहर देखिन सक्थ्यो,´डा। कोइरालाले बताए । ओ-मिक्रोन प्रजातिको बिए।वान उपप्रजाति सङ्क्रमितलाई बिए।टू सङ्क्रमण हुन्छ या हुँदैन भन्ने यकिन नभएको विज्ञहरू बताउँछन् । सङ्क्रामक रोग विज्ञ डा। शेरबहादुर पुन भने सबै सङ्क्रमित परीक्षणको दायरामा नपरेकाले तथ्याङ्कलाई अन्तिम मान्न नहुने तर्क राख्छन् । यद्यपि सङ्क्रमणको तेस्रो लहर `शिथिल बनेको”´उनको तर्क रहेकाे छ । सङ्क्रमण दर उत्कर्षमा पुगेर घट्दै गर्दा विद्यालय र सिनेमा घर साथै अन्य व्यापारिक क्षेत्रहरू खुल्न थालेका छन् ।
सतर्कता कायम राख्नु पर्छ:- डा। पुन धेरै मानिस सङ्क्रमित भइसकेकाले सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि लगाइएका प्रतिबन्धहरू खुला गर्नु सान्दर्भिक मान्छन् । `तर व्यवस्थापन र सावधानीको पाटोमा सतर्क चाहिँ रहनु पर्छ । विशेगषरी खोप नलगाएकाहरू, दीर्घरोगी र वृद्धवृद्धाले सावधानी अपनाउनु पर्छ,´ उनले भने । कम मानिसलाई सङ्क्रमण हुँदा आम मानिसले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना नगर्ने प्रवृत्तिबारे चिकित्सकहरूले चिन्ता व्यक्त गरे ।
फेरि कस्ता समस्या देखिन सक्छन् त ? धेरै जनामा सङ्क्रमण भएकाले मानिसमा को- रोना भाइरसको एन्टिबडी विकास भए पनि सावधानी नअपनाउँदा सङ्क्रमण घट्ने क्रम प्रभावित हुन सक्ने डा। कोइराला बताउँछन् । `एक ठाउँमा सङ्क्रमण घटे पनि मापदण्ड पालना नगर्दा अर्को नयाँ ठाउँमा सङ्क्रमणको जोखिम बढ्छ । त्यसैले समग्र देशको सङ्क्रमण दर घट्ने क्रममा बाधा पुर्याउछ । यो पूर्ण रूपमा चाहिँ जाँदैन,´ उनले भने । त्यस्तै नयाँ भेरिअन्ट देखिन सक्ने सम्भावनातर्फ पनि विज्ञहरूले इङ्गित गरे ।
सङ्क्रमण धेरै फैलिएको ठाउँमा भाइरस उत्परिवर्तनको सम्भावना बढी हुने डा। कोइरालाको तर्क छ । नयाँ स्वरूपको भाइरसलाई शरीरको प्रतिरक्षा प्रणालीले पहिचान गर्न सक्दैन । `खोप लगाए पनि नयाँ भेरिअन्टको सङ्क्रमणपछि प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर हुन्छ । त्यसैले नियन्त्रण गरिएन भने भाइरसको उत्परिवर्तन र त्यसको असर झनै क-डा बन्न सक्छ,´ उनले भने । को- रोना भाइरसको सङ्क्रमण मानिसमा मात्र नभई जनावरमा पनि देखिएको छ ।
त्यसैले यस भाइरस इ`न्फ्लु`ए`न्जा कु`खुरा सुँ`गु`र र च`रामा भएजस्तै विभिन्न जनावर वा मानिसमा रहन सक्ने डा। कोइराला बताउँछन् । `नयाँ भेरिअन्टले कुनै समय ठूलो प्रकोप ल्याउन सक्ने सम्भावना रहन्छ । त्यसैले यसलाई जनस्वास्थ्य र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले निरन्तर निगरानी गर्नु पर्छ ।´ डा। पुन भने भाइरसको स्वरूप परिवर्तन भइराखे पनि सम्भावित उत्परिवर्तनहरू क-डा नभई कमजोर बन्दै जाने अनुमान गर्छन् ।
`ओ-मिक्रोन नै को- रोना भाइरसको अन्तिम स्वरूप हो भन्न सकिँदैन किनकि यसमा उत्परिवर्तन हुने क्षमता छ । तर यसका आगामी भेरिअन्टले ज्या-न नै लिने अवस्था नआउँला,´ उनले भने ।
खोपलाई निरन्तरता आवश्यक:- डा। पुन खोपको प्रभावकारिता र आवश्यकता माथि समेत जोड दिन्छन् । डा। जनक कोइरालाको पनि समान धारणा छ । उनले को- रोना भाइरस विरुद्ध बनेका खोपको तीन मात्रा झनै प्रभावकारी हुने बताए । तर समय क्रममा नयाँ भेरिअन्ट देखिएको अवस्थामा हालसम्म बनेका खोप कति उपयुक्त हुन्छन् भन्ने निश्चित नभएको उनले जिकिर गरे ।
`मानिसमा एन्टिबडी घटेर अपर्याप्त भएपछि फेरि खोप लगाउनु पर्ने हुनसक्छ । हरेक वर्ष वा नयाँ भेरिअन्ट आए पछि मात्र लगाउन पर्ने पनि हुन सक्छ ।´ उनका अनुसार खोपले प्राकृतिक सङ्क्रमणले भन्दा बढी प्रतिरोधात्मक क्षमताको विकास गर्छ उनले यस लहरमा सङ्क्रमित भएकाहरूले सङ्क्रमणमुक्त भएको ३० दिन पछि खोप लगाउनु उचित हुने बताए । बिबिसी नेपाली
Next अण्डा उसिनेकाे पानी बिर्सिएर पनि खेर फाल्ने नगर्नुहाेस्, यस्ता छन् यसका फाइदै-फाईदा